Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Apache na ụdị kachasị ọhụrụ na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 9, 2021 September 3, 2021 by Jọshụa James
Na-agbakwụnye ebe nchekwa Apache nke Ondřej Surý Repository
Nhọrọ. Hazie UFW Firewall maka Apache
Apache, bụkwa nke a maara dị ka Ihe nkesa HTTP Apache, bụ otu n'ime ngwa sava weebụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Site na ndabara, arụnyere Apache, yana na ebe nchekwa Debian 11 Bullseye; Otú ọ dị, na Debian, nsụgharị kwụsiri ike adịghị agbanwe ọtụtụ akụkụ ma e wezụga maka nchekwa ma ọ bụ mmelite ahụhụ ngwa ngwa iji mee ka aha ahụ dị "kwụsi ike," nke mara ha. N'ihi nke a, Apache nwere ike tufuo njirimara na nkwalite ọhụrụ yana ndozi ahụhụ na-enweghị nchekwa karịsịa nyere oge igbu oge n'etiti mwepụta Debian kwụsiri ike ịbụ afọ ole na ole n'etiti.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi eme nkwalite gaa na sava weebụ Apache kacha ọhụrụ na Debian 11 Bullseye.
Ngwungwu achọrọ: curl
Nkuzi ga-eji ihe ngwugwu curl; mbụ, chọpụta ma ọ bụrụ na ngwugwu dị:
Ọ bụrụ na itinyeghị curl, jiri iwu a:
Nzọụkwụ mbụ bụ mbubata na wụnye Apache webserver na ọhụrụ version bụ tinye ebe nchekwa site Ondřej Surý's. Maka ndị ahụ na-amaghị, Ondřej bụ onye na-echekwa PHP na Debian.
Iji tinye ebe nchekwa ahụ, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Melite ebe nchekwa gị iji gosipụta mgbanwe ọhụrụ:
Ugbu a ị wụnyela Ebe nchekwa Apache wee melite ndepụta nchekwa, tinye Apache2 na ihe ndị a:
Pịnye Y, mgbe ahụ, pịa igodo ntinye ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Na-esote, gosi na nrụnye ahụ gara nke ọma site n'ịkwado ihe nrụpụta ọhụrụ:
Ugbu a, jide n'aka na Apache na-agba ọsọ site na iji systemctl iwu:
Ọ bụrụ na Apache adịghị arụ ọrụ, ka ịmalite ngwa sava weebụ, jiri iwu a:
Iji mee ka Apache rụọ ọrụ na buut sistemụ, jiri ihe ndị a:
A ga-edobe ma na-emelite ụdị a mgbe ụdị Apache ọhụrụ dị; Ondřej Surý na-emelite n'ime ụbọchị ole na ole ruo izu ole na ole ka ọ na-edobe ebe nchekwa PHP, Nginx na Apache wuru; ọ na-agbanwe agbanwe na mmelite ya.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Apache 2 ma ọ bụ iji ebe nchekwa nke Ondřej Surý. N'ozuzu, Apache bụ ihe nkesa ngwa weebụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa ruo ọtụtụ iri afọ. Agbanyeghị, Nginx emechaala n'isi ntakịrị ntakịrị. Apache ka bụ otu n'ime ngwa weebụ a na-ebugharị na ama ama, ọkachasị yana ijikọ nchịkọta LAMP, nke a na-ejikarị maka sava weebụ azụ azụ. Ị ga-achọta nhọrọ enyi na enyi maka Apache karịa Nginx, na-eduga ndị ọrụ ọhụrụ ịbanye na sava weebụ ha, ikekwe ịnwale Apache n'elu Nginx dị ka nzọụkwụ mbụ.
Categories Debian Tags Apache, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo